Samsung Galaxy S အတွက်ခံစားချက် Rom SlimBean 4.3 Androidsis
ယနေ့ငါ၏အသုံးပြုသူများအဘို့သင့်ကိုဆောင်ခဲ့ရမည် Samsung Galaxy S, မော်ဒယ် GT-I9000, စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ပါတယ် Rom SlimBean အပေါ်အခြေခံသည် အန်းဒရွိုက် 4.3 ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal ကို Flash လုပ်ရန်အပေါ့ဆုံးရွေးချယ်မှုများထဲမှတစ်ခု။
SlimBean ဒါဟာတစျဦးဖွစျသညျ Android 4.3 ဒီမီးသတ် terminal ကိုရှာတွေ့နိုင်သောပိုကြော့ Samsung မည်သူမဆိုစိတ်ကူးထားနိုင်သည့်မည်သည့်စစ်ပွဲထက်မဆိုစစ်ပွဲများပိုမိုပေးနေသည်၊ ပျောက်ကွယ်သွားရန်ဝေးကွာလွန်းသောနေရာများအတွက်၎င်းင်းတို့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများပိုမိုများပြားလာသည်။
ဤမူကွဲများ အပတ်စဉ် သူတို့ကအလွန်ဆင်တူဗားရှင်းဖြစ်ကြသည် Cyanogenmod အားဖြင့်ညစဉ်ညတိုင်း နှင့်ဗားရှင်းအသစ်များသည်များသောအားဖြင့်နေ့စဉ်နီးပါးထွက်လာတတ်သည်၊ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်နေ့တည်းတွင်မွမ်းမံချက်နှစ်ခုအထိပင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
၎င်း၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများသည်၎င်း၏ပေါ့ပါးမှု မှလွဲ၍ အပင်ကိုရောက်ရှိသည် 100 Mb, ၎င်း၏မှောင်မိုက်ပြီးကြော့ရှင်းသောအရောင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် Android ၏စင်ကြယ်သောနှင့်ခက်ခဲသည့်ဗားရှင်းကိုထူးခြားစွာထိတွေ့စေသည်၊ FOOT ထိန်းချုပ်မှုl သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဗေဒနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသင့်လျော်သည် တစ်ခုလုံးကို terminal ကိုဆောင်ပုဒ် reverseကလစ်တစ်ချက်တည်းဖြင့် Gapps အပါအ ၀ င်။
Nandroid Backup ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုစနစ်၏
ဘက်ထရီ al 100 × 100 သင့်ရဲ့ဝန်၏
ဤ rom ကိုမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည် သုံးချုံ့ ZIP ဖိုင်များကို download လုပ်ပါ, Rom သူ့ဟာသူနှင့်အတူတ ၎င်း၏တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းနှင့်အတူအခြား အပတ်စဉ် update ကို နှင့်အတူအခြား addons အပါအဝင် ဇာတိဂူဂဲလ်အက်ပ်များ။ download စာမျက်နှာတွင် Gapps အတွက်အပိုထပ်များထည့်ပုံကိုသင်တွေ့နိုင်သည် ပါးလွှာသောအနည်းဆုံး Gapps.
ဖိုင် (၃) ခုကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့်၎င်းတို့အတွင်းကော်ပီကူးယူပါလိမ့်မည်။ Samsung Galaxy Sသို့ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လည်စတင်နိုင်သည် recovery mode နှင့် rom installation နည်းလမ်းနှင့်အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်။
Mount နှင့်သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ cache, data, datadata နှင့် system ကို format လုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် rom ၏ zip ကိုရွေးပြီး၎င်းကို flash လုပ်ပါ
နောက်တဖန် zip ကိုရွေးချယ်ပါ
Weekly update ၏ zip ကိုရွေးပြီး၎င်းကိုတပ်ဆင်ပြီးကြောင်းအတည်ပြုပါသည်။
Gapps ၏ zip ကိုရွေးပြီး၎င်းကိုတပ်ဆင်သည်။
ဒီနှင့်အတူကျနော်တို့မှန်ကန်စွာ flashed ကြလိမ့်မည် SlimBean 4.3 Rom ကျွန်တော်တို့ရဲ့မီးခံ၌တည်၏ Samsung Galaxy S modelo GT-I9000မွမ်းမံမှုတစ်ခုလုပ်လိုသည့်အခါသတိရပါ အပတ်စဉ် Rom မှသာ Wipe cache အခန်းကန့်နှင့် Wipe dalvik cache ကိုအဆင့်မြင့်မှပြုလုပ်ရန်သာလိုအပ်ပါသည်။ သို့မှသာ application များဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်ဒေတာသိမ်းဆည်းခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ရှောင်ရှားနိုင်ပါမည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - ပြုပြင်ထားသော Recovery ကို Samsung Galaxy S တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း, EFS ဖိုင်တွဲအရန်ကူးခြင်း
ဒေါင်းလုပ် - ရွမ်, ရက်သတ္တပတ်, Addons
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Samsung Galaxy S, Rom SlimBean Android 4.3 အပတ်စဉ်ဗားရှင်းများ
ငါ့မှာ Galaxy S3 ရှိတယ်၊ ငါကြိုးစားပြီး၊ အဆင့် ၅ မှာဒေတာဒေတာမပေါ်လာဘူး၊ ဒါကမှန်ရဲ့လား။
တောင်းပန်ပါတယ်၊ Galaxy S, ငါအမှားလုပ်နေတာမြင်လိုက်တယ်။
Cesar သန္တာ ဟုသူကပြောသည်
သို့သော် S3 ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်သင်သေချာလား ??????
CESAR CORAL သို့စာပြန်ပါ
၎င်းသည် galaxy S i9000 အတွက်ဖြစ်သည်။ S3 တွင်ထည့်သွင်းသောမြည်းများမထားပါနှင့်။
ကျွန်တော်စမ်းသပ်ခဲ့တာကတော့ကျွန်တော့်ရဲ့ fireproof S1 မှာစမ်းသပ်ခဲ့တာပါ။ ဒါကစူပါအရည်ပါ။
ငါအပတ်စဉ် update ကို download လုပ်လို့မရဘူး, ငါ log ၏အမျိုးအစားအဖြစ် redirected ရ, ငါအဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း
download link ပေါ် right click နှိပ်၍ တိုက်ရိုက် download လုပ်ပါ။
download လုပ်လို့မရဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ .txt file တစ်ခုအနေနဲ့ browser က ၄ င်းကိုစာသားအနေဖြင့်ဖွင့်လိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုကျွန်တော့်အတွက်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ဖိုင်တွေက ၀.၀၁mb သာရှိမယ်။
ငါအဲဒါကိုထည့်သွင်းလိုက်တယ် ပထမမိနစ်အနည်းငယ်အဆင်ပြေစွာသွားပြီးနောက် android.process.acore ပြိုကျသွားသည်၊ ထို့နောက်ကီးဘုတ်သည်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ဖြင့်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။
ကျွန်ုပ်တွင် TsunamiX roms လများစွာရှိခဲ့ဖူးပြီး၊ ကျွန်ုပ်အတွက်သိပ်ပြီးလေးလံနေပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ပြောင်းလဲရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ် ပို၍ ဆိုးရွားသည်။
ငါ၎င်းကိုထည့်သွင်းပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုပြproblemsနာများမပေးနိုင်ပါ။ သင်အဆင့်များကိုထပ်မံပြုလုပ်ရန်အကြံပြုပါသည်။ ငါမှာလည်း Tsunami rom ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီ Limrom rom ဟာပိုပြီးကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်၊ ပိုပြီးအရည်ပျော်ပြီးအပြင်ပန်းကိုတိုးတက်စေတယ်။
တစ်စုံတစ် ဦး က APN ပြင်ဆင်မှုကိုမသိမ်းဆည်းသောကြောင့်ဖြစ်ပါသလား။
စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ နောက်ဆုံးစာပိုဒ်ကိုနားမလည်ပါ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုရှင်းပြနိူင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
Hi-Francisco၊ ကောင်းပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ input အတွေ့အကြုံကိုမှတ်ချက်ပေးပါမည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်မြန်ဆန်သော interface တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်အလွန်တင့်တယ်လှသည်။ ၎င်းသည်အင်တာဖေ့စ်တစ်ခုတွင်တွေ့ရခြင်းမှာအလွန်ကောင်းသည်။ သို့သော်မိုဘိုင်းကွန်ယက်ကကျွန်ုပ်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ Bluetooth ကိုလည်းသော်လည်းကောင်းမသိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ် EFS သည်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် (EFS Backup ရှိရန်လိုအပ်သည့်အဆင့်များအတိုင်းလိုက်နာခြင်း) တွင်ပျောက်ဆုံးသွားသည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား device ရှိကျွန်ုပ်၏ EFS ဖိုလ်ဒါတွင်ကူးထည့်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ ကျွန်ုပ်အမှားတစ်ခုရခဲ့သည်။ efs / nv_data.bak ကိုပိတ်ခြင်း eacces ခွင့်ပြုချက်ငြင်းဆိုခြင်းကိုငြင်းပယ်ခြင်းကိုပိတ်ပင်ထားသည်။ ) ၎င်းသည်ဆဲလ်ဖုန်းမဟုတ်သောကြောင့်၎င်းအားခေါ်ရန်အသုံးမပြုနိုင်ပါကထိုရလဒ်နှင့်အတူ ၂ ကြိမ်ထည့်သွင်းရန်သတိထားပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကထိုပြsaveနာကိုမည်သို့ကယ်တင်ရမည်ကိုသိလျှင်မှတ်ချက်များကိုဝေငှခြင်းသည်ကောင်းပေမည်။
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်း Zito Moreno ကိုငါကိုယ်တိုင်သဘောတူတယ် ငါသိမ်မွေ့ပေမယ့်ရိုးရှင်းတဲ့ရှာဖွေနေ ROM ကို install လုပ်အလွန် snappy ။ သို့သော်လည်း efs ဖိုင်တွဲကိုပင်ပြန်ယူလျှင်အော်ပရေတာနှင့်ကွန်ယက်တစ်ခုမရနိုင်ပါ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသွက်လက်လွယ်လွယ်ကူကူခံစားရလို့ပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် ROM ကိုသုံးလို့ရတာမှားတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာသိရင်ငါလိုချင်ပါတယ်
PS: အခုအချိန်မှာဘယ် ROM ကိုသုံးနေတာလဲ။
အပတ်စဉ် update ကိုမရနိုင်ပါ tt
အရာအားလုံးကိုဖြေရှင်းပြီးပြီလားဆိုတာငါမသိပေမယ့်ဒီ sim ကငါ့ကိုလည်းအသိအမှတ်မပြုဘူး။ ပြီးတော့ဒီ Modem ကို KF1 ကိုပြောင်းလိုက်တယ်၊ ဒါကအံ့သြစရာကောင်းတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကကူညီပေးသည်ဆိုပါက။ မင်္ဂလာပါ။